Tinye ihu gị na Chakwasa ihie | Martech Zone
Tinye ihu gị na Chakwasa ihie
Tọzdee, Septemba 13, 2012 Tọzdee, Septemba 13, 2012 Douglas Karr
Ndị folks na-echefu nọmba ekwentị, akara ngosi, aha na URL… mana ha anaghị echefu ihu n'ihu. Ọ bụ ya mere anyị ji akwado ka ndị ahịa anyị niile nweta ihu ha ebe ahụ! More na ndị ọzọ, anyị na-elekọta mmadụ ọnụnọ, anyị blog posts na ọbụna anyị search results na-amalite na-egosi ihu. Ihu enyi dị mma bụ ọnụ ụzọ na-akasi obi iji nweta atụmanya n'ihu gị ma ha agaghị eleda anya.
Tụkwasa m obi, anaghị m etinye nnukwu 'ol mug ebe niile n'ihi na m hụrụ onwe m n'anya. Ana m eme ya ka ndị mmadụ wee na-amata m. So… dobe ihe niile ma mee ihe ndị a:
Chọta onye ọkaibe mara mma - Ahapụla onyonyo gị na igwefoto iPhone ma ọ bụ laptọọpụ gị… onye na-ese foto ga-edozi ọkụ ahụ ma nye gị ihe omimi nke miri emi kwekọrọ na njirimara gị. Anyị hụrụ n'anya Paul D'Andrea's ọrụ! Tụkwasị obi na mkpebi ha na ọnọdụ na mpaghara ahụ!
Banye maka Gravatar akaụntụ - bulite ihe oyiyi gị, gbakwunye ma gosipụta adreesị email gị niile. A na-eji Gravatar jiri ọtụtụ usoro ịza ajụjụ na mgbakwunye WordPress (onye nwere ebe ikpo okwu) yana a na-asọpụrụ ya. Ugbu a ihu gị ga-egosipụta mgbe niile ma ị nọ na nkwupụta ma ọ bụ na profaịlụ WordPress.
Debanye maka Google+ - Ọ bụrụ ngbakwunye saịtị ndị ị nyere aka na profaịlụ Google+ gị, onyonyo gị ga-egosipụta na nsonaazụ ọchụchọ ma ọ bụrụ na akara edemede dị n'ime saịtị ahụ (ọtụtụ nyiwe ịde blọgụ emejuputara nke a). Mgbe ụfọdụ Google+ na - egosiputa onyonyo gị n’enweghị akara, kwa!
Mezue profaịlụ WordPress gị - nnukwu plugins dị ka Yoast's WordPress SEO ngwa mgbakwunye gbakwunye ubi iji tinye profaịlụ Google gị, na-enye akara ngosi dị mkpa iji mee ka ihe oyiyi gị gosipụta na nsonaazụ ọchụchọ.
Gbalịa idobe ihe oyiyi gị na-agbanwe agbanwe na profaịlụ netwọk mmekọrịta gị. Mgbe mmadụ malitere ịhụ ihu gị na azịza nke blog, mgbe ahụ na Facebook, na Twitter, ha nwere ike bụrụ ndị na-akwado ofufe, ndị na-eso ụzọ ma ọ bụ ndị ahịa! M na n'ụzọ nkịtị ka ndị mmadụ na-eje ije ruo m si Paris ka San Francisco bụ ndị ghọtara m site m foto… ọ na-akwụ ụgwọ na dividends!
Dị ka ọkachamara na oghere, m ga-akwado megide katuunu (belụsọ na ị bụ onye na-ese foto) ma ọ bụ onyogho ndị ọzọ. Ọ gwụla ma ha nwere ọrịa na-adịghị ahụkebe a maara dị ka prosopagnosia, ụmụ mmadụ na-amata ihu dị mma karịa ka ha na-echeta nkọwa ndị ọzọ gbasara azụmahịa gị ma ọ bụ ngwaahịa na ọrụ gị.
PS: Nke a blog post sitere n'ike mmụọ nsọ nke onye njikwa ọrụ anyị, Jenn Lisak, na-ezigara onye ahịa nnukwu email na-akọwa otu ihe ahụ!
SERP na-ebupụta Index Search Engine Search Index
Nkwupụta mmekọrịta gị na ebe nrụọrụ weebụ gị
Mee 13, 2016 na 1: 18 PM
Akwa post. Dika anyi mara onye obula bu ihe puru iche ka odidi onye obula bu ihe di iche.